Tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Issyk-Kul ny mpizahatany voalohany avy any Tashkent
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Issyk-Kul ny mpizahatany voalohany avy any Tashkent
Jolay 4, 2017
Tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Issyk-Kul ny vondrona mpizahatany voalohany avy any Tashkent androany 4 jolay. Nanomboka sidina iray avy any Tashkent mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Issyk-Kul (seranam-piaramanidina Tamchy) ny Uzbek Airways ny 4 Jolay ka hatramin'ny 30 Aogositra.
Nanjary mora kokoa ny dia ho an'ny mpizahatany iraisam-pirenena any Azia Afovoany satria natomboka teo anelanelan'ny Tashkent Uzbekistan ka hatrany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Issyk-Kul Kyrgyzstan izany sidina izany dia nitatitra ny masoivohom-baovao Dispatch News Desk (DND). Boeing 757-231 dia hanao ny sidina amin'ny zotra mankany Tashkent mankany Tamchy ary miverina.
Ny sidina fahavaratra voalohany dia nitondra mpizahatany iraisam-pirenena niaraka tamin'ny solontenan'ny andrim-panjakana ao Ozbekistan, ao anatin'izany ny Minisitra lefitra misahana ny raharaham-bahiny any Ozbekistan Anvar Nasyrov, ho filohan'ny delegasiona. Komil Rashidov, ny masoivohon'i Ozbékistan ao Kyrgyzstan, ary i Ravshan Usmanov, ny lefitra voalohan'ny talen'ny komitim-panjakana momba ny fampandrosoana fizahantany dia niaraka tamin'ny minisitry ny raharaham-bahiny.
Ny faritra Issyk-Kul dia fantatra amin'ny hatsaran-tarehy mahafinaritra, ny fizahantany ary ny farihy Issyk-Kul ("farihy mafana"). Farihy Issyk-Kul no farihy masira faharoa lehibe indrindra eto an-tany, izay tsy mamirifiry na dia eo aza ny haavony eo amin'ny tandavan-tendrombohitra Tian Shan sy ny toetrandro mangatsiaka indrindra amin'ny ririnina. I Karakol no renivohitry ny faritra izay voahodidin'ny Faritra Almaty (Kazakhstan) any avaratra ary ny faritra mahaleo tena sinoa Xinjiang ao atsimo atsinanana.
Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Issyk-Kul dia nantsoina taloha hoe Airport Tamchy, nanomboka ny asany tamin'ny taona 1975 ho seranam-piaramanidina ho an'ny seranam-piaramanidina Cholpon-Ata akaiky. Ny lalamby sy ny terminal ankehitriny dia natsangana tamin'ny 2003. Tamin'io taona io ihany, nomen'ny Governemanta Kyrgyz ny anarana hoe seranam-piaramanidina Tamchy ho lasa seranam-piaramanidina iraisampirenena Issyk-Kul.
Vakio ny lahatsoratra tany am-boalohany.
Ny Fetiben'ny Sakafo Halal lehibe any Amerika Avaratra dia mitondra trano fisakafoanana halal 200 any Toronto
Sinaloa, Mexico nandefa ny “Tanan'izao tontolo izao ao Vatican”